Static ဖုန်မှုန့်အိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း - Bag, အမြင့်အသုံးဖုန်မှုန့်အိတ်, ဆန့်ကျင် Dusting
အိတ် Dusting,မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်မှုန့်အိတ်,ဆန့်ကျင် - Static ဖုန်မှုန့်အိတ်,ဖုန်မှုန့် Filter ကို Bag,,
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: အိတ် Dusting,မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်မှုန့်အိတ်,ဆန့်ကျင် - Static ဖုန်မှုန့်အိတ်,ဖုန်မှုန့် Filter ကို Bag,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ် Dusting
အိတ် Dusting ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အိတ် Dusting, မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်မှုန့်အိတ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဆန့်ကျင် - Static ဖုန်မှုန့်အိတ် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ အိတ် Dusting ပေးသွင်း
အထည်အိတ် Dusting အိတ် filter ကို၏နှလုံးဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဖုန်မှုန့်ဒါမှအပေါ်အိတ်, ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးအိတ်, မြေမှုန့်စုဆောင်းအထည်အိတ်နှင့်စုဆောင်း, filter ကိုဖုန်မှုန့်အိတ်, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး filter ကိုအိတ်, မြေမှုန့်စုဆောင်းအိတ်ဟုခေါ်သည်။ အထည်အိတ် Dusting အိတ် filter ကို၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် cylindrical filter ကိုအိတ် duster အတွက်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပါတယ်။
filter ကိုအိတ်များ၏ထည်နှင့်ဒီဇိုင်း, filtration အတွက်ဖုန်မှုန့်အခွံနှင့်တာရှည်ခံရန်လွယ်ကူအလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာဖြစ်သင့်သည်။
ကြိုတင် filter ကိုအလွှာအဓိက filter ကိုအလွှာများနှင့်မျက်နှာပြင်အဖုံး: 1. ဆံချည်မျှင်သွေးကြောရေနံစုပ်ယူအိတ်သုံးပိုင်းပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာအထူးအရည်အတွက်အမဲဆီ၏ထိရောက်သောထိစိမ့်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းများ၏ porosity အလွန်ထုတ်ကုန်များ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်သည့် 80%, သကဲ့သို့မြင့်မားသည်။ ရေနံစုပ်ယူ၏ပမာဏကို filter ကိုအိတ်၏အလေးချိန်၏ 12 ~ 20 ကြိမ်သကဲ့သို့မြင့်မားသည်။
2. အကြွင်းမဲ့အာဏာတိကျချောမွေ့စွာ filter ကိုအိတ်ပူအရည်ပျော်တန်ဆာအားဖြင့်စင်ကြယ်သော polypropylene ဆံချည်မျှင်သွေးကြောဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်အလွှာအလွှာ filtration ပေးနက်ရှိုင်း filter ကိုပစ္စည်းထူသည်, အတွင်းလက်ထပ်မံခြုံငုံနက်ရှိုင်းသော filtering ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပါဝင်၏စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။ ပျမ်းမျှသက်တမ်းသာမန် polypropylene filter ကိုအိတ်၏ထက်ငါးဆပိုမိုမြင့်မားသည်။ အမြင့်ဆုံး filtration တိကျမှန်ကန်မှု 3um ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကော်လာလက်စွပ်တစ်ပလပ်စတစ်လက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်။
3. မျက်နှာပြင် filter ကိုအိတ်နိုင်လွန် monofilament, polyester monofilament နှင့် polypropylene ပေါင်းစုံမျက်နှာပြင်၏လုပ်နေကြသည်။ အမြင့်ဆုံး filtration တိကျမှန်ကန်မှု 20um features တွေ: အကြွင်းမဲ့အာဏာ filtration တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်မားခိုင်မာခြင်း, ဆန့်ကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိဖိုင်ဘာအခမဲ့နှင့်ထပ်တလဲလဲသုံးနိုင်တယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: အိတ် Dusting , မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်မှုန့်အိတ် , ဆန့်ကျင် - Static ဖုန်မှုန့်အိတ် , ဖုန်မှုန့် Filter ကို Bag , Cage အရိုး Dedusting